ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာ Archives - Page7of 10 - Pissaya News
ကိုယ့်အိမ်မှာ၊ ကိုယ့်ရုံးမှာ အိမ်သာထက် အဆများစွာ ပိုညစ်ပတ်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေ စုနေတဲ့ အဓိကသော့ချက် နေရာတစ်ခု ရှိပါသတဲ့။ အဲဒီနေရာကတော့ ကွနိပျူတာကီးဘုတ်ပါတဲ့။ ကွန်ပျုတာကီးဘုတ်တစ်ခုမှာ ရောဂါပိုးပေါင်း 3295 ခုကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ – ● ဟယ်လီကိုဘက်တာပိုင်လောရီ ဘက်တီးရီးယား (H pylori) ● စတက်ဖလိုကောကတ်စ် ဘက်တီးရီးယား (Staphylococus aureus) ● အီးကိုလိုင်ပိုး (Ecoli) ● ဆူဒိုမိုးနား အရီဂျီနိုစာ (Psedomonas Aeruginosa) ပိုးတွေ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေပါတယ်။ ရောဂါပိုးပေါင်းစုံ တွယ်ငြိနေတဲ့ သံယောဇဉ်ကီးဘုတ်လေးကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြရအောင်…။ ● အရင်ဆုံး မီးခလုပ်ကိုပိတ်၊ ပါဝါကို ဖြုတ်လိုက်နော်။ ပိုးကြောင့်မသေခင် အရင် ဓာတ်လိုက်မှာစိုးလို့။ ● ကီးဘုတ်ကို ပိုးသတ်ဆေးတွေ မဖျန်းလိုက်ပါနဲ့။ အပေါက်တွေထဲ ဝင်သွားရင် ရှိစုမဲ့စု ဝယ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာလေး လစ်သွားမယ်လေ။ ● အရက်ပြန်လား? ဂွမ်းလား? ခဏစောင့်ပါ။ စနိုးတာဝါသန့်သန့်လေးနဲ့သာ အရင်ဆုံး အသာ ပွတ်တိုက် သန့်စင်ပါ။ ● အဝတ်သန့်လေးမှာ အရက်ပြန်လေး ဆွတ်ပါ။ ကီးဘုတ်ခလုတ်တွေရဲ့ ထိပ်ကိုသာ သန့်စင်ပါ။ အရည် ညှစ်မချပါနဲ့။ သတိပေးထားပါတယ်။ ပျက်ရင် တာဝန်မယူနိုင်ပါ။ ကီးဘုတ်သန့်နေတုန်း ဘေးမှာ ပန်ကာ ဖွင့်ထာားပါ။ ချက်ချင်း ခြောက်သွေ့သွားအောင်ရယ်၊…
ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောပညာရှင်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် စိတ်ကြည်နူး လန်းဆန်းစေတဲ့ ဟော်မုန်းပမာဏတွေကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေပြီး နေထိုင်ကောင်းစေပါသတဲ့။ မိခင်က သားသမီးကို ပွေ့ဖက်တာ၊ အဖေက စာမေးပွဲကျတဲ့သားကို ပခုံးဖက် နှစ်သိမ့်တာ၊ အသက်ကြီးတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကို ယုယုယယ ဖက်ပေးတာတွေဟာ မြတ်နိုးကြင်နာမှုကို ပြသရာရောက်သလို စိတ်ကျန်းမာရေးကိုသိသိသာသာ ကောင်းလာစေပါတယ်။ ● မြတ်နိုးရတဲ့ ချစ်သူလေး စိတ်မကြည်လင်တဲ့အခါ ဖက်ပြီး ချော့တာဟာ စကားလုံး အလုံးတစ်ရာထက် သာသွားပါတယ်။ ● အရေပြားချင်း ထိတွေ့ပေးတာဟာ ဇနီးခင်ပွန်းကြားမှာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ မကြာခဏ လိင်ဆက်ဆံပြီး ထိတွေ့ မှု ပြုပေးကြသူစုံတွဲတွေ၊ အမြဲဖက်ရမ်း နမ်းရှုံ့တတ်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ စိတ်ကျေနပ်မှု ပိုရရှိပြီး ဆက်ဆံရေး ခိုင်မြဲလာကြပါတယ်။ ● မိခင်ဖြစ်သူ၊ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ပွေ့ဖက်အားပေးတာကို အမြဲခံယူရတဲ့ကလေးတွေဟာ ဉာဏ် ပိုထက်မြက်ပြီး လောကရေးရာတွေကို ပိုမိုရင်ဆိုင် သတ္တိရှိတဲ့ လူငယ်တွေအဖြစ် ကြီးပြင်းလာကြပါတယ်။ ● မိခင်ရဲ့ နှိပ်နယ်ပေးတာ၊ ပွေ့ဖက်ယုယတာ၊ အသားချင်း ထိတွေ့တာကို ခံယူရတဲ့ မွေးကင်းစလေးတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့ ပါးလာပြီး ကြီးထွားနှုန်း ပိုမိုမြန်ဆန်လာကြပါတယ်။ ● အဘိုးအဘွားတွေဟာ မကြာခဏ ဖက်တာ၊ ပွေ့ဖက်ပေးတာ ခံရတဲ့အခါ စိတ်လုံခြုံမှုရရှိပြီး ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းလာကြပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ထိတွေ့နှုတ်ဆက်တာတွေ ရှားပါးလာပါတယ်။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာ၊…
၁၀ မိနစ်ခန့် ခုန်ဆွခုန်ဆွ လုပ်လိုက်ခြင်းဟာ နာရီဝက်ပြေးတာနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ကလေးတွေလို အားရပါးရ ခုန်ပေါက်ခြင်းမှာ ကျန်းမာရေး အကျိုးထူးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ● ခန္ဓာကိုယ်တွင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပိုမိုကောင်းလာဖို့ လှုံဆော်ပေးပါတယ်။ ● အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို တိုးပွားစေပါတယ်။ ● ကြွက်သားတွေ၊ အရွတ်တွေကို တောင့်တင်းသန်မာလာစေတယ်။ ● ခန္ဓာကိုယ်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ● နှလုံးနဲ့ သွေးကြောများကို သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းလာစေတယ်။ ● ပြန်ရည်ကျိတ်တွေနဲ့ ပြန်ရည်စီးဆင်းမှုကို ချောမွေ့ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။ ● အသက်ရှင်ရခြင်းရဲ့ အရသာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံစားလာရပြီး ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု တိုးလာစေပါတယ်။ Credit – ဂျီပီငှက် (ဆေး/မန်း) (drmyanmar.com)
● ဗင်နီဇွဲလား အလှမယ် ကေစီဆာယာဂိုကတော့ အသားအရေကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေအောင် ရေများများ သောက်ပါသတဲ့။ အိပ်ရာမဝင်ခင် မိတ်ကပ်တွေ အကုန်အစင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းဆေးတစ်ခု လိမ်းအိပ်ပါတယ်။ ● ပီရူး အလှမယ် ပရီဆဲလ်လာဟောဝပ်ကတော့ အပြင်ပန်းအလှဆိုတာ အတွင်းစိတ်အလှနဲ့ တည်ငြိမ်ပညာရှိမှုရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်ချက်ပါတဲ့။ သူမဟာ နေ့စဉ် စာတစ်အုပ် ဖတ်လေ့ရှိပြီး ဗဟုသုတ ရှာမှီးတဲ့အပြင် လေ့ကျင့်ခန်း ခန်းမသွားဖို့လည်း မပျင်းသူပါ။ ● မက္ကဆီကို အလှမယ် ဒန်နဆီဖရန်စကိုကတော့ အပြုံးဟာ အလှဆုံး အပြုအမူပါတဲ့။ အမြဲပြုံးနေ တဲ့အပြင် သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုဟာ သမင်မလေးလို ရွှင်လန်းတက်ကြွနေပါသတဲ့။ သူမက ဆံပင်အတွက်လည်း အကြံပြုထားပါသေးတယ်။ တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါ အုန်းဆီ ရွှဲနေအောင် လိမ်းပြီး သူမရဲ့ ရှည်လျားသွယ်လျ တဲ့ဆံပင်ကို အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ ● ဘရာဇီး အလှမယ် မိုနယ်ဆာကတော့ တစ်ရက်ကို ရှစ်နာရီ အနည်းဆုံးထား အိပ်စက်ခြင်းဟာ သူမဘဝနဲ့ အလှအပအတွက် အရေးအပါဆုံးပါတဲ့။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ ရေကို တစ်စိုက်မတ်မတ် သောက်သုံးတတ်သူပါ။ ● ကိုလံဗီယာ အလှမယ် လော်ရာကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လက်ခံ အကောင်းမြင်တာကို အဓိကလို့ ယူဆပါသတဲ့။ သူမဟာ မှန်ကြည့်ပြုံးပြပြီး မိမိကိုယ်မိမိ အားနည်းချက်တွေပါမကျန် ကိုယ့်ဘာသာ အားပေး လက်ခံပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ● ပူရီတိုရီကို…
ဒိန်ချဉ်သောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်သလိုပဲ မျက်နှာမှာ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့်လည်း အောက်ပါအကျိုးထူးများ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အစိုဓာတ် ထိန်းပေးခြင်း ● အသားခြောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း ● ရေဓာတ် ဖြည့်ပေးနိုင်ခြင်း ● အသားအရေ ကြည်လင်စေနိုင်ခြင်း ● ဆဲလ်သေများကို ရှင်းလင်းပေးနိုင်ခြင်း ● မျက်နှာ အပြစ်အနာအဆာများ ကင်းဝေးပြီး လှတစ်မျက်နှာ ဖြစ်စေနိုင်ခြင်း ● မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို သက်သာစေခြင်း ● အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း ● မှိုပိုးကို သက်သာစေနိုင်ခြင်း Credit – Dr. Mya Phoo Ngon (drmyanmar.com)
ချင်း (ဂျင်း) ချင်းမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အတွက် အသားအရည်ညစ်ခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများဖြစ်ခြင်း စတဲ့အိုမင်း ရင့်ရော်တဲ့လက္ခဏာတွေကို တိုက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးရေပြားနဲ့ ဆံသားကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုရင် ချင်းမှာပါဝင်တဲ့ ပိုးသတ်နိုင် တဲ့အစွမ်းကြောင့် ဦးရေပြားပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ ဗောက်ထခြင်းများကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ နနွင်း အသုံးများဆုံးအိမ်သုံးဆေးဝါးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ နနွင်းမှာဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပအတွက် အကျိုးကျေးဇူး များစွာ ရှိပါတယ်။ မျက်နှာ အသားအရည်များကို ညီညာစေတဲ့အပြင် အမဲစက်တွေကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။ နနွင်းအနည်းငယ်နဲ့ သခွားရည် (သို့) သံပရာ ရည်အရောကို မျက်နှာမှာလိမ်းပြီး 15 မိနစ်ခန့်ထားပါ။ ပြီးလျှင် မျက်နှာသစ်ချပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် နနွင်း၊ ဂျုံတို့ကို ရေနဲ့ရောပြီး ရေ မချိုးမှီ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပွတ် တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးရင် တောက်ပတဲ့အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ သစ်ကြံပိုးခေါက် သစ်ကြံပ်ိုးခေါက်က သွေးကြောတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြင့် အရေပြားသွေးစီးဆင်းမှုကိုကောင်း မွန်စေပါတယ်။ သစ်ကြံပိုးခေါက် အဆီ3စက်ကို သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း2ဇွန်းနဲ့ရောပြီး မျက်နှာမှာလိမ်းနိုင်ပါတယ်။ အရေးအကြောင်းတွေကို ပျောက်ကင်းစေပါ တယ်။ နွယ်ချို နေလောင်ဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမဲကွက်တွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ နွယ်ချိုမြစ်ကို ရေနဲ့သွေးပြီး မျက်နှာမှာလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အသားအရည်ကို တောက်ပစေနိုင်ပါတယ်။ နွယ်ချိုပါတဲ့ မျက်နှာလိမ်းဆေးတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။ ဇာတိပ္ဖိုလ်သီး ဝက်ခြံ၊ နှင်းခူတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူမှုန့် Amino acids ကြွယ်ဝပြီးတော့ ဆံပင်တွေကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။ ဦးရေပြားနဲ့…
1. နှိုးစက်ကို ပြန်ပိတ်ပြီး အိပ်စက်ခြင်း – နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အချိန်မှန် အိပ်စက်၍ အချိန်မှန် နိုးထခြင်းဖြင့် ကောင်းစွာ အနားရနိုင်ပါတယ်။ 2. အိပ်ရာမှ အမြန်ထခြင်း – လှဲနေရာမှ ရုတ်တရက် မတ်တတ်ရပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သွေးတွေဟာ ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားကြောင့် ခြေထောက်ဆီသို့ စီးဆင်းသွားတာကြောင့် သွေးပေါင်ချိန် ရုတ်တရက် ပြုတ်ကျကာ ခေါင်းမူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မတ်တတ်မရပ်မီ ခုတင်စွန်းမှာ ခဏထိုင်ခြင်းဖြင့် မူးဝေခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်းတို့ကို ရှောင်လွှဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 3. ကော်ဖီမသောက်ဘဲ နေကြည့်ခြင်း – မနက် အိပ်ရာထတဲ့အခါမှာ ကော်ဖီသောက်လေ့ရှိတဲ့သူတွေဟာ မသောက်ရတဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူ ပင်ပန်းလွယ်၍ အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းနဲ့ အအေးမိတုပ်ကွေး လက္ခဏာတွေကို ခံစားရခြင်း စတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကဖိန်းကို ဖြတ်တဲ့အခါမှာ အထက်ပါဆိုးကျိုးတွေ မခံစားရစေဖို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းသာ ဖြတ်သင့်ပါတယ်။ 4. သွားတိုက်ဖို့ မေ့လျော့ခြင်း – ညစဉ်ညတိုင်း သွားပေါ်မှာ အဖတ်လေးတွေ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ကပ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက် မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာ သွားမတိုက်ပါက အဲဒီအဖတ်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်း မာလာပြီး သွားဆရာဝန်ရဲ့ အကူအညီနဲ့မှသာ ဖယ်ရှားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊ သွားဖုံးသွေးယိုခြင်း၊ သွားပိုးစားခြင်း၊ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်း၊ သွားဖုံးရောဂါရခြင်းအပြင် အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ 5.…
သွေးပေါင်ချိန် အရမ်းတက်နေတဲ့အခါ 1. ခေါင်းအရမ်းကိုက်မယ် 2. မျက်စိပြာမယ်၊ အမြင်ေ၀၀ါးလာမယ် 3. မျက်နှာပြင် နီရဲလာမယ် 4. မူးဝေပြီး အော့အန်မယ် 5. ရင်တုန်ပြီး ရင်ဘတ်အောင့်လာမယ် 6. အသက်ရှုရခက်မယ် 7. အခန့်မသင့်ရင် လေဖြတ် လေဖြန်းခြင်း နှင့် မူးမေ့ခြင်းတွေ ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို လက္ခဏာမျိုးတွေ ခံစားလာရပြီဆိုရင် သွေးတိုးခြင်းနှင့် အခြားရောဂါဟုတ်မဟုတ် သိနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံ၊ဆေးခန်းမှာ အမြန်ဆုံး စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့ အကြံပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ သွေးတိုးရှိသူများအနေနဲ့ ဒီလို ဆိုးရွားတဲ့ သွေးတိုးခြင်းမျိုး မကြုံရဖို့ဆိုရင် 1. ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ 2. အရက်သောက်ခြင်းအား ရှောင်ကြဉ်ပါ 3. အငန်လျှော့စားပြီး အသီးအရွက်များများစားပါ 4. တစ်နေ့လျှင် မိနစ်သုံးဆယ်လောက် လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ 5. ၀လွန်းသူများ ၀ိတ်လျှော့ပါ 6. သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ အမြဲတမ်း တိုင်ပင်ပြသနေဖို့လိုပါတယ် Credit – On Doctor Home Call
အိမ်မှာ အောက်ပါပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး ဒိန်ချဉ်မျက်နှာ ပေါင်းတင်ဆေး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ – လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နှင်းဆီပွင့်လွှာ6ရွက်၊7ရွက် – နှင်းဆီရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း2ဇွန်း – Manuka ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း 1 ဇွန်း – ဒိန်ချဉ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း 1 ဇွန်း ပစ္စည်းများ စုံလင်ပြီ ဆိုရင်တော့ – 1. နှင်းဆီပွင့်လွှာများကို ဇလုံတစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး ချေပေးပါ။ 2. ဒိန်ချဉ်၊ ပျားရည်နဲ့ နှင်းဆီရည်ကို ချေထားတဲ့ နှင်းဆီပွင့်လွှာနဲ့ ရောပေးပါ။ 3. မျက်နှာပေါ် သုတ်လိမ်းပါ။ 4. 10 မိနစ်ခန့် ထားပြီး မျက်နှာသစ်ချလိုက်ပါ။ ဒိန်ချဉ်ရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုက မျက်နှာပေါ် ဒီအတိုင်း လိမ်းပေးနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေးအပြင် ဒိန်ချဉ်သီးသန့်ကို မျက်နှာပေါ် အဝိုင်းလိုက် ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ တစ်ပတ် 1 ကြိမ်၊2ကြိမ် ပုံမှန်လုပ်ပေးပါက မျက်နှာအသားအရည် စိုပြေပြီး ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေလောင်နေပါက ဘာမှမလိမ်းဘဲ ဒိန်ချဉ်အေးအေးလေးကို လိမ်းပေးပါ။ ဒိန်ချဉ်မှာပါတဲ့ ဇင့်ဓာတ်က နီရဲခြင်းနဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေပြီး UVB ray ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ melanin ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ Source…
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မကောင်းတဲ့အဆီ LDL ဟာ သွေးလွှတ်ကြောတွေထဲမှာ စုပုံလာတတ်ပြီး နှလုံးနဲ့ သွေးကြောရောဂါအမျိုးမျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအဆီဓာတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်မှာ မများအောင် ထိန်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ပုံမှန်ရှိနေဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဒီ LDL အဆီဓာတ်ကို အသည်းက ထုတ်ပေးပြီး တချို့အစားအစာတွေကတစ်ဆင့်လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ LDL အဆီဟာ သည်းခြေရည်ကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး နှလုံးနဲ့ သွေးကြောတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုအပ်တာထက် အဆီတွေ စုပုံလာတဲ့အခါ သွေးလွှတ်ကြောတွေထဲမှာ စုပုံလာပြီး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ စတဲ့ ရောဂါမျိုးစုံ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အဆီဓာတ် LDL ဆိုတာ ဘာလဲ? ပေါ့ပါးတဲ့ အဆီတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ LDL ဟာ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော အဆီတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သွေးကြောတွေမှာ စုပုံတတ်ပါတယ်။ နှလုံးနဲ့ သွေးကြောရော ဂါတွေ မှာ ဒီအဆီဟာ အဓိကဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ သူ့ကို အသံတိတ်လူသတ်သမားလို့ လည်း ခေါ်ကြပါသေးတယ်။LDL ကိုလက်စထရော ၁၃၀mg/dl ထက် များနေပါက အဆီများနေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့ အဆီ တစ်မျိုးဖြစ် တဲ့ HDL ကိုလက်စထရော အမျိုးသားတွေမှာ ၃၅mg/dl နဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၄၀mg/dl ထက် နည်းနေပါကလည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မကောင်းပါဘူး။…